Tsarakofafa – Toamasina: vonoan’olona mampiahiahy, olona roa indray voasambotra | NewsMada
Tsarakofafa – Toamasina: vonoan’olona mampiahiahy, olona roa indray voasambotra
Par Taratra sur 01/08/2017
Nisy namono tamin’ny fomba feno habibiana tao Tsarakofafa Toamasina, ny alin’ny alahady 23 jolay 2017 lasa teo Rakotomamonjy Mathias Etienne, 31 taona fantatry ny maro amin’ny anaram-bosotra hoe Tega. Araka ny fampitam-baovao voaray avy any an-toerana, noho ny hetraketry ny namany ny antony nahatonga izao vonoan’olona izao. Raha ny fizahan’ny mpitsabo, feno mangana ny vatany iray manontolo ary folaka ny tendany.
Ny alatsinainy maraina, fantatra avy hatrany ireo olona voarohirohy ho nahavanon-doza tamin’ity vonoan’olona ity. Ireo namany mpiara-mifoka rongony sy misotro toaka tao an-tranona mpamongady toaka gasy no voalaza fa ambadik’ity raharaha ity. Nametraka fitarainana noho izany ny fianakaviany ka saron’ny polisy ireo roa lahy ahiahina ho tompon’antoka tamin’izany sy ilay renim-pianakaviana mpivarotra rongony sy ny toaka gasy tompon’ilay toeram-pivarotana nisehoan’ny habibiana.
Tsy hanaiky ny fianakaviany…
Mpikambana eo anivon’ny fikambanana “Tsimivaha” Rakotomamonjy Mathias Etienne, araka ny fanadihadiana voaray. Fikambanana isan’ny manana ny tanjany ao Toamasina ity fikambanana ity. Nohamafisin’ny fianakaviana hatrany fa nangataka tamin’ny kaomisera misahana ny ady heloka bevava izy ireo, saingy tsy nanaiky izany ilay kaomisera sy ny tale iraisam-paritry ny filaminana anatiny. Misy resaka mandeha amin’izao fa hoe nivarotra tany ny fianakavian’ireo voarohirohy mba hanavotana azy telo mianaka voasambotra noho ity raharaha ity, raha ny fanazavana hatrany. Nitondra ny alahelony tamin’ny alalan’ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety ireo fianakaviany ary nilaza fa tsy hanaiky ho vitavita mora manoloana izao vonoan’olona izao.
Fantatra izao fa nahazo fahafahana vonjimaika rehefa niakatra teny amin’ny fampanoavana ilay renim-pianakaviana nampiantrano sy fisotroana ary fifohana zava-mahadomelina. Andrasana ny tohin’ity raharaha vonoan’olona ity.